Home Wararka Dibada Zelenskyy: ”90% Ruushka waxa uu burburiyay dhismaha Luhansk & Severodonetsk”.
Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskyy oo ka hadlay Xaaladda dalkiisa ayaa sheegay in burbur xooggan uu soo gaaray Magaalooyinka uu Ruushka ku beegsaday Gantaallada culus sida Luhansk & Severodonetsk.
Volodymyr Zelenskyy, waxa uu sheegay in 90% dhaawac xooggan oo burbur ah uu gaaray Magaalooyinkaan oo dhaqaale badan kasoo geli jiray Dowladdiisa, Ruushka ayuu ku eedeeyay in uu dhibaato xooggan uu ka geystay Dalkiisa.
Zenenskyy, ayaa sheegay in Dad badan lagu dilay Magaalooyin dhowr ah, lana burburiyay, halka dadka ka badbaaday rasaasta iyo duqeynta ay isaga baxeen iyaga oo aanay heysan waxyaabaha aasaasiga u ah noloshooda.
Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskyy oo 24kii saac mar la hadla Shacabkiisa ayaa soo bandhiga dagaalka socda, xaaladda, waxyeelada Ruushka uu u geystay Dalkiisa iyo fariin uu ku dhiira-gelinayo Dadkiisa si ay isu difaacaan.
Serhiy Haidai, Guddoomiyaha Gobolka Luhansk Oblast ayaa sheegay in biyo & Gaas la’aan ka jirto Gobolkaas oo ay ka barakaceen ilaa Hal Milyan oo qof, waxa uu quus ka muujiyay dib usoo laabashada Dadkaas Mustaqbalka dhaw.
Adeegyada uu burburiyay Ruushka ee Gobolka Luhansk Oblast ayuu Guddoomiyaha Gobolkaas tilmaamay in muddo ay qaadaneyso dib usoo celintooda waa haddii dedaal xooggan la geliyo sida uu hadalka u dhigay Serhiy Haidai.
Previous articleMaqaayad Faransiis ah oo Sacuudiga ku taalla oo loo diiday haweenka xijaaban
Next articleLaamaha Amniga degaanka Nambar-konton oo ka hortegay weerar kaga yimid Al-Shabaab